Zurich မှာဘာတွေကြည့်ရမလဲ ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, ဇူးရစ်မြို့
ဆွစ်ဇာလန်တွင်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည် ဇူးရစ်မြို့၎င်း၏စီးပွားရေး၊ ဘဏ္financialာရေးနှင့်တက္ကသိုလ်စင်တာ။ သင်သည်ဥရောပရှိအခြားမြို့များမှလေယာဉ်၊ လမ်း၊ ရထားနှင့်သွားနိုင်သည်။
Zuricht တွင်စွဲဆောင်မှုများစွာရှိပြီးယနေ့တွင် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားသော်လည်းယခုနွေရာသီတွင် visitors ည့်သည်များကိုလက်ခံသည်။ ကြည့်ကြရအောင် ယနေ့ Zurich ကြည့်ဖို့ဘာ.
2 Zurich မှာကြည့်ဖို့ဘာ
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဆွစ်အဖွဲ့ချုပ်၏အကြီးဆုံးမြို့သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏မြို့တော်ဖြစ်သော Bern နှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။ ၎င်းတွင်ရောမတို့၏မူလရင်းမြစ်ရှိသည် ဒါကြောင့်၎င်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အချက်များမှာချစ်စရာကောင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းဟောင်းတစ်ခုနှင့်ပိုပြီးခေတ်မီတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
အဟောင်း နင် ၎င်းကိုရောမစစ်သားများကတည်ထောင်ခဲ့ပြီးယင်း၏အမြင့်ဆုံးတွင်နေထိုင်သူ ၃၀၀ ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ရောမအင်ပါယာသည်အေဒီ ၄၀၁ တွင်ဆုတ်ခွာသွားပြီးထိုအချိန်၌အခြေချနေထိုင်မှုများပြားလာသည် ၁၃ ရာစုတွင်၎င်းကိုမြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
ထဲမှာ အလယ်ခေတ် ဇူးရစ်တွင်မြို့တော်ကိုဗဟိုပြုစေသည့်မြို့ရိုးများနှင့်ရဲတိုက်များ၊ ခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်းများနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများရှိသည် ကက်သလစ်နှင့်ပရိုတက်စတင့်အကြားဘာသာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ။ ဒီစစ်ပွဲကိုအနိုင်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကအဲ့ဒီဒေသမှာလူကြိုက်အများဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဇူးရစ်မြို့ Alps မှကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာ Limmat မြစ်ကမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ပတ်ပတ်လည်လှပသောတောင်ကုန်းနှင့်အတူ။ ၎င်း၏မြို့ဟောင်းမှာ Lindehof ၏မြစ်နားတွင်နူးညံ့သောတောင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ယနေ့ဇူးရစ်တွင်တတိယမြောက်ငွေရှာခြင်းလုပ်ငန်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၉ သန်းသည်ယင်း၏ဆွဲဆောင်မှုများကိုသိရှိလာကြသည်။
Lindhof မြို့ဟောင်း ဒါကြောင့်မြို့ရဲ့ဘ ၀ မှာအရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်များစွာရဲ့မြင်ကွင်းပါ။ ဒီမှာ ရောမခံတပ် နှင့်ကိုးရာစု၌တည်၏ Charlemagne ၏မြေး၏တော်ဝင်နန်းတော်, ဥပမာ။ ဒီနေရာဟာGrossmünsterဘုရားကျောင်း၊ Town Hall၊ မြစ်ကမ်း၊ တက္ကသိုလ်၊ ဆွစ်ဖက်ဒရယ်နည်းပညာအင်စတီကျုးရှင်းကိုသွားလည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ် ...
La Grossmünsterဘုရားကျောင်း ၎င်းသည်မြို့၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ဒဏ္legာရီအရ Charlemagne သည် Zurich ၏နာယကသူတော်စင် Felix နှင့် Regula တို့၏သင်္ချိုင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထိုတွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် ၁၆ ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုရှိသည် လှပသောစွန်းထင်းသောဖန်ခွက် Sigmar Polke ကလက်မှတ်ရေးထိုးသည် romanesque crypt, အ choir ပြတင်းပေါက် Giacomettu နှင့်ခမ်းနားအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည် ကြေးဝါတံခါးများ သူတို့ကို Otto Múnchကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Niederdorf ၎င်းသည်မြို့ဟောင်း၏ထောင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Oberdorf areaရိယာတွင်လည်းတည်ရှိသည်။ Isaလူကူးဇုန် နှင့်အတူ Limmatquai မှအပြိုင် running အများအပြားဆိုင်များနှင့်လမ်းကြား နေ့အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်လျက်၊ ညဉ့်အခါကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည် ညခရိုင် လမ်းအဆိုတော်များနှင့်ဘားနှင့်အတူ။
မွို့၌ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်းသည် စိန့်ပီတာဘုရားကျောင်း။ ၉ ရာစုအုတ်မြစ်များရှိပြီးယနေ့တွင်ဇူးရစ်မြို့၏ပထမဆုံးမြို့တော်ဝန်ရူဒေါ့ဖ်ဘွန်း၏သင်္ချိုင်းဂူတွင်ရှိသည်။ တစ်ခုရှိသည် 8.7 မီတာ၏အံ့သြဖွယ်နာရီ အချင်း ကိုးရာစုနှောင်းပိုင်းမှချိန်းတွေ့ငါးခုနှင့်အတူခြောက်လအလေးချိန်အကြီးဆုံး ...
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ၏တဦးတည်း အလှပဆုံးနှင့်သမိုင်းဝင်လမ်းများသည် Augustinergasse ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောအဆောက်အအုံများနှင့်ရောင်စုံပြတင်းပေါက်များရှိသည့်ကျဉ်းမြောင်း။ လှပသော၊ ပင်လယ်အော်ပြတင်းပေါက်များမြို့တော်ကို၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းမှကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Bahnhofstrasse ကို ၁၃ ရာစုသြဂတ်စတင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်လမ်းမသည်မြို့ဟောင်းရှိစိန့်ပီတာဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Peterhofstatt ရင်ပြင်သို့ဆက်သွားသည်။
Bahnhofstrasse ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောလမ်းဖြစ်သည် ကြံ့ခိုင်သော Boulevard မကြာမီတွင် Zurich ရထားဘူတာကိုဆောက်လုပ်ပြီးနောက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်တစ်ဝက်ခန့်ကကျုံးများရှိခဲ့သော်လည်းယနေ့လမ်းသည်တစ်မိုင်နီးပါးခန့်တွင်ရထားဘူတာနှင့်အိုင်ကိုဆက်သွယ်ထားသည်။ ရှိသည် ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, စတိုးဆိုင်များ, ဒါကြောင့်တစ် ဦး သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် အလွန်လူကြိုက်များစီးနင်း။
ချစ်သူ ၎င်းသည်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် Bahnhofstrasse ၏စိတ်နှလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကန်နှင့်မြို့ဟောင်းအကြားလမ်းဆုံဖြစ်ပြီးဘဏ္financeာရေးဗဟိုဖြစ်သည်။ ၁၇ ရာစုတွင်ကျွဲနွားစျေးကွက်ရှိသောကြောင့်ထိုနယ်မြေသည်စျေးကွက်သုညဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ၁၉ ရာစုတွင် Neumarkt ကိုအမည်ပြောင်းခဲ့ပြီးရာစုနှစ်ဝက်အကြာတွင်လက်ရှိ Paradeplatz ဟူသောအမည်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Rennweg Zurich ရှိနောက်ထပ်လမ်းတစ်ခုပါ က အဟောင်းနှင့်ပုံမှန်လမ်း တစ်ချိန်ကမြို့အတွက်အကျယ်ဆုံးလမ်း။ တောင်ပေါ်ကိုတက်လော့ Bahnhofstrasse မှဖြစ်ပြီးယခင်ကအလယ်ခေတ်ခံတပ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော Rennwegtor, တံခါးဟောင်းရှိသေးသည်။ အဲဒါက ဒုတိယအရေးအပါဆုံးဈေးဝယ်လမ်း ၎င်းသည်လမ်းလျှောက်သူဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။
Schipfe သူ၏အဘို့ဖြစ်၏ Zurich ရှိရှေးအကျဆုံးရပ်ကွက်တစ်ခု နှင့် Lindenhof အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပြေး။ ဒါကိုရည်ညွှန်းတဲ့အရာလို့ခေါ်တယ် ချစ်သူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တံငါသည်တွေဟာသူတို့ရဲ့လှေတွေကိုမြစ်ထဲကနေတွန်းထုတ်လိုက်ကြလို့ပါ။ ၁၁ ရာစုတွင်ပိုးထည်လုပ်ငန်း၏ဗဟိုဖြစ်လာသည် ဒီနေ့ကအနုပညာရှင်တွေ၊။ ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်လို့ရတယ်
နောက်ဆုံးတော့မင်းလုပ်ရမယ် ဗဟိုရဲစခန်းသို့သွားပါ အကြောင်းမူကား၊ Augusto Giacometti အားဖြင့်ပန်းချီကားများ ဒီအဆောက်အအုံဟာမိဘမဲ့ဂေဟာဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀ ရာစုနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ဒီအတွက်ပြိုင်ပွဲကိုခေါ်ပြီး Giacometti ဟာသူ့ရဲ့ပြင်းထန်သောဒီဇိုင်းများနှင့်အနီရောင်နှင့် ocher တို့ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူ၏အလုပ်သည်ရဲစခန်း၏အဓိကခန်းမမျက်နှာကြက်နှင့်မျက်နှာကျက်ကိုအလှဆင်ထားသည်။
မြို့တစ်မြို့ကိုမြင်နိုင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည် - ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ၎င်း၏လမ်းများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကောင်းမွန်သောအမြင့်သို့တက်ခြင်း မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Zurich နှစ် ဦး စလုံးခွင့်ပြုပါတယ်။
အမြင်များအတွက်ကျနော်တို့တက်သွားနိုင်ပါတယ် Freitag မျှော်စင်, အတွက်တစ်ခုခုစားပါ မြင်ကွင်းကျယ်ဘား Jules Verne, မှာရပ်တန့် Lindehof ရိုး, Karlstrum တက်ဂရော့စ်မွန်စတာဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ဇူးရစ်၏မျှော်စင်နှစ်ခုအနက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလယ်ဗဟိုမှတစ်နာရီလမ်းလျှောက်။ ၀ ှင့်ကင်းဂန်နှင့်ဟော့ဂ်တို့ကို ဖြတ်၍ Käferbergတောင်ကိုတက်ပါ။
ပြီးတော့သင်ဟာထိပ်တန်းတစ်ခုခုလိုချင်ရင်၊ ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာချွေးပေါင်းအိမ်? Thermalbad & Spa Zurich သည်စက်ရုံဟောင်းတစ်ရုံတွင်ဖြစ်သည်။ ရေသည်အပူဖြစ်ပြီး၊ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများနှင့် ၃၅ မှ ၄၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားသာသာသောအပူချိန်ရှိသည်။ CHF 35 အတွက်သင်တွင်အပူရေချိုးရှိပြီး CHF 41 တွင်သင့်တွင်အိုင်းရစ် - ရောမရေပူစမ်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုမင်းပြတိုက်တွေထည့်နိုင်တယ်။ စက်ဘီးသို့မဟုတ်ပင်လှေစီး, မြစ်ရေနားမှာ။ Zurich ကိုသင်ကြိုက်လိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဇူးရစ်မြို့ » Zurich မှာကြည့်ဖို့ဘာ